पत्रकार चौतारीको मादल « Tuwachung.com
योगेश ढकाल	२०७६ चैत्र ८, ०३:००
अधिवेशनमा पक्कै केही व्यावसायिक तथा पेसागत मुद्दा उठ्नेछन् । चर्को दलीयता नेपाली प्रेसको व्यावसायिक विकासको एक बाधक पक्ष हो । यो पक्षमा कोही पनि बहस गर्न चाहँदैनन्, उल्टै दलको सिन्दुर पहिरिएकोमा गर्व गर्छन् । खल्तीभित्र एउटा राजनीतिक दलको सदस्यता बोकेर, एउटा व्यावसायिक संस्थाको दूत भनेर वा कुनै गुप्तचरी निकायको एजेन्ट बनेर सञ्चारगृहमा पस्ने गर्छौं । पत्रकार आचारसंहिताले पत्रकारले के–के गर्नुहुँदैन भनेर एउटा ‘नकारात्मक कामको सूची’ नै बनाएको छ । तर, प्रवृत्तिका हिसाबले पुलिस पत्रकार, सेना पत्रकार, एनजीओ पत्रकार, जासुस पत्रकार, सक्रिय पार्टी पत्रकार, कम्पनी पत्रकार छुट्ट्याउन हम्मेहम्मे पर्ने अवस्था आएको छ । दलको पत्रकार हुन नपुगेर गुटको पत्रकार हुने र गुटमा पनि दाइको पत्रकार हुन थालेका छौं । वैचारिक तथा व्यावसायिक दुवै हिसाबले संसारमा स्वत्रन्त पत्रकारिता हुँदैन । पहिलो विश्व, दोस्रो विश्व र तेस्रो विश्वका अलावा देशविशेषले आफ्नो सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता र हितअनुकूलका समाचार प्रकासन÷प्रसारण गर्छन् । तर, तेस्रो विश्वका हामी भने पहिलो विश्वको प्रोजेक्टमा त्यहीँको पत्रकारिता स्वतन्त्र, निष्पक्ष र अनुकरणीय छ भन्छाँै । दोस्रो विश्वको प्रोजेक्टमा ती देशको पत्रकारिता स्वन्त्रत, व्यावसायिक हो भन्छौं । तेस्रो विश्वका हामी पत्रकार सधैँ प्रोजेक्टको बलमा स्वतन्त्र पत्रकारिताको नारामा रमाउने गर्छौं । पत्रकारले राजनीति बुझ्नुपर्छ । आफैँले राजनीति नबुझीकन अरूलाई कसरी बुझाउन सकिन्छ ? स्वाभाविक प्रश्न हो । तर, आफू राजनीतिक दलको सक्रिय कार्यकर्ता हो वा पत्रकार छुट्ट्याउनै मुस्किल पर्नेगरी दोहोरो भूमिका देखाउन हुन्छ ? राजनीतिमा असफल भएकाहरू पनि पत्रकारितामा छिरेका छन् । राजनीतिमा टिक्न असफल वा क्षमताको हिसाबले अक्षम ‘पत्रकारको पनि विचार हुन्छ’ भन्ने नाममा पेसाको हुर्मत लिइरहेका छन् । पत्रकारितालाई उपयोगमात्रै गर्ने उद्देश्य भएका यस्ता सिकारु राजनीतिक कार्यकर्ताको पन्जाबाट यो पेसालाई मुक्त गर्ने कि नगर्ने ? महासंघका साथै श्रमजीवी पत्रकारले पहिला सोच्नैपर्ने र बहस गर्ने पर्ने विषय हो ।